Ciidamo ka tirsan Amisom aoo Jawaab ka bixiyay Cabashadii gaadiidleyda Afgoye & Muqdisho – SBC
Ciidamo ka tirsan Amisom aoo Jawaab ka bixiyay Cabashadii gaadiidleyda Afgoye & Muqdisho
Ciidamo isugu jira Kuwa dowlada Federaalka Soomaaliya iyo Amisom ayaa jawaab ka bixiyay cabashooyin dhowaan ka soo yeertay gaadiidleyda ka shaqeysata wadooyinka isku xira magaalada Caasimada ah ee Muqdisho iyo magaalooyinka gobolka Shabeelaha hoose.
Gaadiid kooda dagaalka ciidamada Amisom iyo kuwa Dowlada Soomaaliya ayaa la sheegay in ay maanta weerar sifeyn ah ku qaadeen wadada u dhexeysa Muqdisho iyo Afgooye kuwas oo fuliyay howlgal ay ku qaadeen tiro isbaarooyin ah.
sida ay xaqiijinayaan gaadiidley ka shaqeysata wadadaas oo SBC la hadlay ciidamadan ayaa qaaday ku dhowaad 4 Isbaaro oo baad iyo falal xun xun loogu geysan jiray rakaabka ay wadaha ka yihiin.
Maalin nimadii shalay ayay hayed markii cabasho shaqo joojin ah ay sameeyeen gaadiidleyda ka shaqeysata wadooyinkaasi iyagoona xiray wadada, balse markii dambe kulan ay la qaateen Ciidamada Amisom ku furay kaas oo uu ka soo baxay howlgalkan Maanta.
Sikastaba ha ahaatee lama xaqiijin karo in howlgaladaasi lagu soo qabqabtay kooxihii wadooyinkaasi jidgooyooyinka dhiganayay balse waxaa la xaqiijiyay in gebi ahaanba la qaaday jidgooyooyinkii ay kooxaha burcada ah wadada dhigteen.
SBC International Afgooye.